PCB ationgha nzukọ - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCb ricgha na Assembly - PCBFuture
Isiokwu: PCB fabricgha, PCB nzukọ chọrọ, Nzukọ Turnkey PCB
Ma ị chọrọ nzukọ PCB, PCB ationgha, nnyefe nzukọ ma ọ bụ turnkey ihe onwunwe - ị nweta nzukọ, PCBFuture nwere ihe dị mkpa iji jikwaa ọrụ gị niile nke ọma. N'ime afọ 15 nke ahụmịhe na ọrụ PCB, anyị mụtara na ego mgbakọ kwesịrị ekwesị, ọrụ dị elu, nnyefe oge na nkwukọrịta dị mma bụ igodo ndị na-eme ka ndị ahịa anyị nwee obi ụtọ ma ọ bụ otu anyị si mee ka azụmahịa anyị nwee ọganiihu.
Ekwesiri itinye ego di nkpa na akụrụngwa tupu akụrụngwa eletriki nwere ike ịdebe ma gbanye ya na bọọdụ sekit gị dịka ndị na-ebi akwụkwọ stencil na-akpaghị aka, bulie ma debe igwe, ọkụ ọkụ, igwe nyocha ngwa ngwa (AOI), igwe X-ray, nhicha igwe, microscopes, na ebe nchekwa ahia.
N'ihi na anyị na-agba mbọ na-ezute gị ụzọ oge na àgwà chọrọ anyị na-mgbe niile na-etinye na nkà na ụzụ ọhụrụ na SMT na site-onu akụrụngwa.
Mere họrọ anyị PCB ricgha na Assembly:
1. A kemmenyeujo otu nke injinia, programmers, SMT rụọ, soldering technicians na QC inspectors.
2. statelọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nwere SMT kachasị ọhụrụ yana site na oghere akụrụngwa na anyị nwere akụrụngwa kachasị mma iji zute ihe niile PCB chọrọ.
3. Anyị nwere ike inye turnkey PCB ọrụ ga-enye ndị kasị mma e biri ebi sekit mbadamba maka ọrụ gị.
4. Ikwu okwu na ntinye na ntanetị na ntanetị.
5. Anyị nwere ọkachamara na obere na ọkara agba na oge ọsọ ọsọ.
6. Nye elu àgwà ngwaahịa na ọrụ na-oge nnyefe na nnọọ asọmpi ahịa.
7. All anyị PCBs bụ Mankeumman na ISO gbaara.
8. A na-ewu PCB anyị niile na ụdị ọkọlọtọ IPC-A-6011/6012 nyocha ọhụụ ọhụụ na klaasị 2 na nyocha dabere na IPC-A-600 Class 2 nyocha ọhụụ ọhụụ, na mgbakwunye na ihe ndị ahịa chọrọ akọwapụtara.
9. All Standard Spec Printed Circuit Boards na-ele ule eletrik.
Anyị nwere ike inye ọrụ:
Single FR4 mbadamba
Mpempe ihu FR4 ihu abụọ
Teknụzụ dị elu kpuru ìsì wee lie ya na bọọdụ
Oké ọla kọpa
PCBFuture nwere nkwado ọrụ injinia. Dị ka PCB & PCB nzukọ emeputaenweghị ike ịga n'ihu na-enweghị nkwado injinia. Ndi otu injinia anyi nwere otutu ndi oru injinia. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa niile a ma ama ha nwere maka nkwado nkwado. Ewezuga ahụmịhe nrụpụta, injinia ntụgharị dị n'ime ọrụ ha. Injinia ha na-enye nkwado siri ike maka nzukọ PCB mgbe niile.
Pụrụ ịdabere na PCB Manufacturing & Assembly.Ihe karịrị ụlọ ọrụ 2000 na-akwado anyị maka na ha chere na anyị nwere ntụkwasị obi. Ugbu a, ọtụtụ na-abịa dị ka ndị na-ezigara ndị ahịa afọ ojuju. N'ihi teknụzụ kachasị ọhụrụ, ọ ga-ekwe omume ịhazi ma mejuputa ọrụ gị nke ọma-na-egosi n'ọdịnihu. Nchegbu ndị ahịa na-elekwasị anya mgbe niile!